Home News Dil ka Shacabka oo Muqdisho ka noqday Joogto,iyo Askartii uu Toogasho Bilaawday+Cabsi...
Dil ka Shacabka oo Muqdisho ka noqday Joogto,iyo Askartii uu Toogasho Bilaawday+Cabsi xoogan oo Jirta!!
Wararka naga soo gaaraya Suuqa degmada Kaaraan ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi nin ku labisnaa dharka ciidamada dowladda uu ku dilay nin darawal ahaa.
Dilka ayaa yimid ka dib markii ninka la dilay uu u diiday Askariga in uu siiyo lacag uu weydiistay.
Waxaa la sheegay ninka ku labisnaa dharka Ciidamada in uu weydiistay ninka dhintay shan kun oo shilin Soomaali ah,islamarkaana uu u diiday.
Askariga oo ka carooday lacagta ninkaasi uu waydiistay oo uu siin waayay ayaa la sheegay inuu xabad ku dhuftay darawalkii waday gaariga, kadibna uu halkaasi ku geeriyooday.
Ninkii xirnaa dharka Ciidanka falkaasi dilka ah gaystay ayaa ka baxsaday goobtii uu dilka ka gaystay, waxaana goobta hadda gaaray ciidamo Boolis ah oo ka tagay Saldhiga Booliska Kaaraan.
“Askariga Shan kun oo Shiling Somali ah ayuu u dilay wiilka waana ka naxnay arrintaasi, sababtoo ah Shan kun maanta wax la isku dilo ma’ahan walaahi ninkiina wuu baxsaday ciidamo Boolis ah ayaa hadda gaaray meesha.” Ayuu yiri qof arkaayay meesha dilka uu ka dhacay.
Previous articleDagaalka Kheeyre Iyo farmaajo Maxuu ka Bilaawday,yuusuf Jeelle in la Cirdeeyo yaa Kheeyre ku Qanciyay??
Next articleKulan Xaaf uu la qaatay qaar ka mid ah Jaaliyadda Galmudug ee London ku Nool oo lagu kala Tagay!!
Dadka Canada oo u dareeray Goobaha Codbixinta